छ के को प्रश्न "डट" अत्यधिक सान्दर्भिक आज छ। शायद धेरै केहि मान्छे "डट" जस्ता कम्प्युटर खेल को सुनेको छैन। विज्ञापन, oddly पर्याप्त, त्यसैले धेरै छैन। तर पनि सबैको ओठ यी अक्षरहरू मा बिना। के को "डट" हेरौं।
सबै को पहिले कम्प्युटरमा खेल मा वास्तविक विरोधीहरूले (अर्थात्, नेटवर्क) संग खेल मा एक जोर संग सञ्चालन गरिएको छ। प्राचीन को रक्षा र रूसी मा - - मा अंग्रेजी यो Dota जस्तै सुनिन्छ एकदम हास्यास्पद - "पुरातन को रक्षा।" खेलको प्रकृति विचार गर्नुहोस्। त्यहाँ पाँच खेलाडी प्रत्येक (वास्तविक मान्छे र कम्प्युटर जस्तै प्ले गर्न सक्नुहुन्छ) को दुई टोली हो। आफ्नो पवित्र मन्दिरमा रक्षा र शत्रु नाश गर्न प्रयास गर्न - प्रत्येक टीम को कार्य।
संसारको यो खेल Warcraft 3. एउटा अवैतनिक थपिएको रूपमा देखे पहिलो पटक यो पनि एक पूरक, तर माथि परिदृश्य संग बरु नक्सा थियो, सटीक हुन। तथापि, खेलाडीहरू चाँडै, उनको शक्ति को ब्यालेन्स सच्याउनुहुन्छ प्याक छोड्न नवीनता र नयाँ नायक ल्याउन थाले जो यो कार्ड, लिएका छन् त खुसी हुन्छन्। केही मानिसहरू त्यहाँ सुरुमा थिए कति सम्झना। आखिर, लगभग एक पटक एक महिना, वा त्यो "Dota" सबै नयाँ र नयाँ संस्करणका अक्सर देखिन्छन्। आज लगभग सारा संसार "Dota 2" भनिन्छ खेल आधिकारिक दोश्रो भाग अवशोषित।
यो एक अलग कार्ड वा अतिरिक्त छैन। "Dota 2" - नयाँ ग्राफिक्स र एक पूर्ण-fledged स्वतन्त्र खेल भौतिक इन्जिन, इन्टरफेस, ग्राफिक्स र नायक, एनिमेसन र यति मा एक नयाँ तरिका को रूप मा अन्य Delights। "डट" आज कस्तो छ? यो शुरुवात थियो जस्तै हो। आखिर, विचार नै रहन्छ: यो एक राम्रो छ अनलाइन खेल, प्रत्येक व्यक्ति टिमवर्क कौशल, समन्वय, प्रतिक्रिया सान सक्नुहुन्छ जसमा। यो तपाईं मा एक कठिन दिनको काम पछि प्रवेश गर्न सक्छन् जो एक सुन्दर संसारको। कम्पनी वाल्व - - खेलको दोस्रो भाग को निर्माताहरू धेरै राम्रो खेल सिर्जना गर्न आए र monotony छिन्न, नयाँ विधा मा खेल बदलन छन् मौसमी घटनाहरू शुरू। उदाहरणका लागि, नयाँ वर्ष, खेलाडीहरू बरफ राजा को सिंहासन दुष्ट र दुष्टात्मा को अग्रिम छालहरू देखि रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ।
प्रत्येक खेलमा को सुरुमा (वा घटनाहरू) खेलाडीहरू आफ्नो चरित्र चयन गर्न आवश्यक छ। के यो मा खेल आज, त्यहाँ पहिले नै बारे 112 वर्ण र निकट भविष्यमा हुन सक्छ अझ - किनभने अद्यावधिक "Dota 2" लिन्छ ठाउँ लगभग हरेक केही दिन। जो एउटा नक्सा युद्धमा नै एकदम सरल र सीधा छ। जंगल मार्फत प्रत्येक अन्य तिर बासस्थान हरेक तीन ट्रेल्स आयोजित: शीर्ष (गेमिंग शब्दजाल शीर्ष लाइन जस्तै सुनिन्छ मा), मध्य (मध्य-लाइन), तल (डुङ्गा-लाइन)। यी ट्रेल्स गर्न हरेक 30 सेकेन्डमा एक सानो कम्प्युटर नियन्त्रित छ जो, सेना को detachment उपलब्ध छ। तिनीहरूले "माथि ढोंगी" वा "ढोंगी" भनिन्छ। तिनीहरूले नायक जस्तै उद्देश्य नेतृत्व छन्। त्यसैले खेल भर प्रत्येक टोली पनि कुनै कारणको लागि एकजुट भएको समुह ढोंगी, र शत्रु संग हुन्छ। साथै, कार्ड एक तटस्थ ढोंगी छ। कुनै पनि हत्या, शत्रु नायक, छिर्न वा तटस्थ (तटस्थ ढोंगी) कि, बहुमूल्य अनुभव र सुन ल्याउँछ। पहिलो हामी युद्धमा गर्न मद्दत गर्नेछ नयाँ कौशल सिकन मा खर्च र दोस्रो लागि हामी शक्तिशाली हतियार र कलाकृतिहरू किन्न। र प्रत्येक वर्ण, सबै बहुमूल्य कलाकृतिहरू, तर लागि मात्र यसको वर्ग लागि सही ती।
"डट" - त्यहाँ नायक तीन कक्षाहरू छन् जो एक खेल: बलियो र शक्तिशाली योद्धाहरू, चुस्त र nimble हत्यारा, बुद्धिमानी र खतरनाक जादुगर। र प्राथमिकता संकेतक पहिलो लागि क्रमशः छ - शक्ति; ; चपलता - दोस्रो लागि तेस्रो - बुद्धि। अक्सर सिपाहीहरूले - यो Melee को नायक, को Dodgers पिट्न सक्षम र नजिक र एक दूरी देखि हो, र sorcerers शत्रु देखि एक दूरी मा को छुटकारा प्राप्त गर्न हिज्जे प्रयोग। सबैतिर हुनत यो दुर्लभ छ, तर मूल्यवान अपवाद। को कक्षाहरू प्रत्येक लागि कलाकृतिहरू र हतियार आफ्नो राम्रो बोनस दिन। तरवार, hammers, हतियार र amulets सैनिकहरू एक बहुमूल्य स्वास्थ्य दिन र हड्ताल गर्न आफ्नो शक्ति बढ्छ। ब्लेड, धनुष र कामोत्तेजक वस्तुहरु Dodgers शत्रु आक्रमण र कारण घातक चोट लागेको उम्कन थप अवसर दिनुहोस्। जादू cloaks, पत्थर rune र तिनीहरूलाई ठूलो क्षति दण्ड दिनु गर्न अनुमति दिने, बढ्छ sorcerers द्वारा शक्ति हिज्जे staves।
हुनत अपवाद छन्: अक्षरहरू केही आफ्नो वर्ग बिरुद्ध मिलान छन् जो कलाकृतिहरू, सङ्कलन गर्न एकदम सम्भव छ। यो नायक को विशेष कारण, हुन्छ, वा विपरीत शत्रु नायक को प्रकार। उदाहरणका लागि, शत्रु sorcerers धेरै टोली भने, यो अर्थमा जादु क्षति भाग अवशोषित जो एक कोट, किन्न बनाउँछ। धेरै हतियार र कलाकृतिहरू अझ घातक संयोजन मा विकास गर्न सक्षम छन् र वर्ण विजय लगभग unstoppable मिसिन बनाउन। तर नायक जन्माई जो mythical amulets न त, छैन तिनीहरूले खेलको नतिजा निर्णय।
के हो "डट"? यो छ सबै माथि वर्णन। तर सबै भन्दा महत्वपूर्ण - यो एक टोली रूपमा कौशल खेल हो। निस्सन्देह, एक्लै विजय आफ्नो गुट पुल गर्न सक्छन् एक सुपर-फाइदा भएकालाई छ। तर सँगै धेरै nicer प्ले। टिमवर्क, रणनीति, प्रतिक्रिया, पर्याप्तता - यी सबै विजेता तपाईं एक दिशा मा वास्तविक मान्छे खेल्न जब लागि मुख्य मापदण्ड हो। यी खेलाडीहरू बिना, कुनै कुरा तिनीहरू कसरी सुन्दर, राम्रो केही सँगै हुनेछ। टोलीमा विजय सबै भागहरु को चिल्लो सञ्चालन देखि निर्भर गर्दछ। पातालमा जो मा दूर समय बग्छ खराब भाषा को एक hotbed, र स्रोत छ - धेरै "डट" भनेर भन्न कम्प्युटर लत। तर गरेको एक वयस्क तरिका मा हेरौं। आज सबैतिर त्यहाँ एक निर्भरता, असभ्य र समय को बर्बादी हो। हाम्रो बच्चाहरु र हाम्रो आफ्नै अवस्था हामी आफू र के privom मान र नैतिकता र नैतिकता को अवधारणाहरु शिक्षित कसरी ठीक निर्भर गर्दछ।
55 तरिकामा कसरी कम्प्युटर मा आफैलाई रम्न, वा नरमाइलो गर्दा के?
वर्णन, गाइड, सफलता र सिफारिसहरू: Dota2मा काउन्टर गड्ढे प्रभुको रूपमा
च्याउ सूप "Maynkraft" कसरी बनाउने र उहाँले दिनुहुने?
Liroy Dzhenkins - Warcraf को खेल विश्व देखि भर्चुअल वर्ण
खेल "ग्रह रत्न"। कसरी "ग्रह रत्न" मा स्तर 334 पारित गर्न
कसरी आफ्नो नङ काट एक पटक र सबै को लागि एक बच्चा wean गर्न?
जहाँ बेलग्रेड जाने? पर्यटकहरुका लागि व्यावहारिक सल्लाह
रेचक औषधि 'Fitolaks': समीक्षा र पुस्तिका
Gynecology मा Leeches
Lisianthus फूल: प्रजनन, रोपण, खेती र मर्मतका
आइभोरी Tilda। आफूलाई सी
एक तूफान के हो र के यसको उपस्थिति निर्धारण गर्छ?